Madaxweynaha “Fursado badan ayaan luminay oo aheyd inaan ka faa’ideysano” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
9th August 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aan loo baahneyn is qab qabsi oo aan dib loogu laaban marxaladihii horay loo soo maray, isagoo cadeeyay in waqti badan uu ka soo lumay 25-kii sano ee la soo dhaafay.
Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay munaasabadii shalay lagu saxiixayay hanaanka maamul u sameynta ee Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kaasoo bilaaban doona bisha September ee soo socota.
“Waqti badan naga lumay, waayo badana na soo dhaafay, fursado badan aan soo gabnay oo ay aheyd mar hore inaan qabsano oo aan ka faa’ideysano, mar kale in aanay na gefin waqtiga inaan naga tagin oo aan ku xisaabtano, 25psano gadaal u sii eegeynaa, meeqa kale gadaal u sii eegeynaa, marka aan horay u socono, aan deg degno, is qab qabsiga iyo waxyaabaha macnaha laheyn aan meel iska dhigno”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha oo sii hadlayay ayaa yiri “dhibaatada, xanuunka iyo waxyaabaha la tabanayo waa ognahay, laakiin wixii aan soo dhaafnay, yaanay mustaqbalka soo socda na gafanin, shalay ninka ku mashquulo berri ayaa dhaafeyso, adduunyada waxay leedahay saddex maalmood shalay, maanta iyo berri”
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa sheegay in xilligan dowladda dhexdeeda uu is faham ka jiro, isla markaana wixii jirana laga tashanayo.
“Waxaa bogaadinayaa oo aan hambalyeynayaa una dhiira gelinayaa is fahamka dowladda dhexdeeda ka jira, haddii ay tahay xukuumadda iyo baarlamaanka, iyo dadaalka ka dhex muuqda ee ah inay is fahmaan, Soomaaliya waxay ku saleysan tahay dowlad dhisideeda waa la wada tashanayaa, waa la is qancinayaa, afkaar kala duwan miiska la soo saarayaa waa laga hadlayaa, nin walba fikirkiisa yaanu la baqin yaanu la baqiilin”ayuu yiri Madaxweynaha.
Dowladda Federaalka ayaa waxaa haatan u haray sanad kaliya, iyadoo la rajeynayo sanadka 2016 inay hab doorasho oo xukunka la isku wareejiyo dalka ka dhacdo, kadib markii ay suura gal noqon weyday inay dhacdo doorasho hal qof hal cod.